Elementary Luna Beta 1: Beautiful Beautiful | Avy amin'ny Linux
ElementaryOS no fizarana irery izay rehefa hitako dia mahatonga ahy haniry ho lany Debian + KDE, ary tsy azo lavina fa kopia na fanatsarana ny OS X, tsara tarehy ny fisehoan'io fisehosehoana io.
Andro vitsy lasa izay cassidyjames nanambara tao amin'ny bilaogy ElementaryOS fa afaka hitsapa ny Luna Beta 1, izay mampiditra vaovao sy fanatsarana mahaliana amin'ity fizarana ity miorina amin'ny Ubuntu 12.04. Na inona na inona lazainy, ElementaryOS mametraka ny làlany manokana izy ary tena mizotra tsara.
Satria mbola tsy afaka nampidina ny .iso aho (olana fifandraisana miharihary toy ny mahazatra), Hiankina amin'ireo sary nalaina Andrei mandeha mamaritra ny singa tsirairay.
Hanombohana azy ireo dia namorona ny azy izy ireo Tontolo iainana Desktop o Shell amin'ny Gnome 3, izay atao hoe Pantheon, izay misy ny Welcome Window, Panel, Application Launcher, Dock, Window Manager, Application Settings, ary Theme. Tena tsara ny fomba fitantanana ny sehatr'asa sy ny fikandrana:
Tiako ny miasa miaraka amin'ny efijery splash, izay ampiasain'izy ireo LightDM ary ny lohahevitra banga dia mampiseho sary miloko sy sary mihetsika mampiseho ny ora sy ny daty ary koa ny safidy azo idirana.
Ny tontonana ambony dia nomena anarana WingPanel. Raha ny filazan'ny mpamolavola azy dia maivana noho ny tontonana Jupiter izy io (ilay kinova taloha) ary manana endrika tsotra sy voadio kokoa. Ny mari-pamantarana azy dia namboarina indray ary ny singa Applications dia misokatra izao Slingshot fa tsy menio.
Slingshot dia mpandefa fampiharana, izay namboarina mba hiasa amin'ny vahaolana hafa, mampiseho ny singa ao aminy amin'ny fomba samihafa. Mba hamenoana ity rindranasa ity dia manana ny Dock izahay, izay voatonona anarana hazo fisaka.
hazo fisaka dia nosoratana avy tany am-boalohany vala, ary tiako manokana izany. Izy io dia manana fiasa tena fototra ary ao anatin'ity kinova ity dia miaraka am-panohanana LibUnity, izay mamela ny fampitomboana ny fari-pahalalana azo atao sy ny asany.
hazo fisaka Izy io dia azo alamina avy amin'ny Control Panel, izay voatonona anarana Switchboard.
Fanapahan-kevitra tena hendry (Tokony hianatra ny Ubuntu) dia nosoloina Compiz ny Gala, mpitantana varavarankely izay mampiasa LibMutter.
Anisan'ireo fampiharana misongadina Geary, mpanjifa mailaka vaovao, izay misandoka Postler.
Maya, kalandrie birao tsotra io. Amin'izany no ahafahanao mamorona, mijery ary mitantana hetsika mba handaminana ny fandaharam-potoananao.
Antsoina ilay mpilalao audio Noise, ary manana interface tsotra be izy:
Hitan'i Luna ihany koa ny fampidirana ny Scratch, tonian-dahatsoratra an-tsoratra maivana, miaraka amin'ny fanohananana lehibe ny fiteny kaody, izay miorina amin'ny rafitra plugin mahery mba hahafahanao manova azy ho IDE anao manokana. Ny zavatra tiako ato amin'ity tonian-dahatsoratra ity dia ny hoe rehefa tahirinao voalohany ny rakitra dia hitohy ho voatahiry isaky ny fanovana ataontsika ... 🙂
Pantheon Terminal, emulator terminal maivana sy tsotra miaraka amin'ny fanohanana ny kiheba.
Farany fa tsy ny kely indrindra ho hitanao Files Pantheon, izay misolo Marlin dia karazana fampifangaroana eo Thunar sy Dolphin ????
Araka ny hita amin'ny fomba ankapobeny, ny fampiharana tsirairay avy amin'ny ElementaryOS mahafeno ny tanjon'ity fizarana ity mba hanomezana kanto sy tsotra ny tsirairay amin'izy ireo. Raha liana amin'ny fanandramana ity fizarana ity ianao dia azonao sintonina avy amin'ireto rohy manaraka ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Elementary Luna Beta 1: Tsara tarehy tsotra
79 hevitra, avelao ny anao
Omaly no notsapaiko tamin'ny maody LIVE, tena milamina ilay interface ary tsy mandany loharano be loatra amin'ny fisehoany. Mariho i Elav fa ny Elementary dia miorina amin'ny Ubuntu 12.04 LTS.
Marina ny anao .. diso ny nametrako azy .. misaotra.
Vao nesorinao teny an-tanako ny vaovao satria hitako izao, andramako izao ary raha ny marina raha oharina amin'ireo isos tsy marin-toetra volana vitsivitsy lasa izay dia nohosorana madio noho izay rehetra nanitsian'izy ireo lesoka be dia be tao amin'ny Files ary ankehitriny Swithboard tokoa Izy io dia mifehy ny safidin'ny rafitra iray manontolo, ankoatry ny fitondran-tena mety amin'ny zorony ho an'ny hetsika toy ny fampisehoana ny varavarankely rehetra sy ny fibaikoana ireo faritra iasana, hapetrako izy ary hanampy amin'ny fitaterana ireo bibikely mandra-pivoakan'ny kinova farany.
PS: Hatramin'ny Luna dia mifototra amin'ny Precise Elav
Eny, efa fantatro ny momba ny Precise, saingy noho ny antony sasany nanoratako ilay lahatsoratra dia tonga tao an-tsaiko i Lucid .. Na izany na tsy izany. Momba ilay lahatsoratra, azonao atao ny mitsapa azy tsara ary manao Review, heveriko fa faly izahay mamaky azy .. 😉
Androany tolakandro dia hamolavola ny netbook miaraka amin'ny kinova Linux Mint farany ... mitovy ihany koa ny andramako an'ity satria toa kely ny laniny.
Beun fandraisana, miarahaba!
O_mino ahy ianao fa ity dia iray amin'ireo akorandriaka Gnome tsara sy madio hitako. Raha mba tiako ny derivatives Debian dia andramako izany, fa satria tsy tiako aho dia gaga fotsiny amin'ny fahavitan'i Pantheon tsara. Mahagaga fotsiny. Raha ny marina dia mieritreritra am-panajana aho fa nahavita asa bebe kokoa tamin'ny kanto izy ireo noho ny Gnome Shell 3.6, ary izany no famotsorana faharoa. Miarahaba ny ekipa, ary ho lava ny ElementaryOS.
tena eny, ratsy loatra izany deba izany
Ao amin'ny Gentoo dia misy overlay hametrahana phanteon, angamba raha tianao ireo mifototra amin'ny kaody loharano dia mety ho liana ianao 🙂
Manantena aho fa betsaka kokoa ny olona mampiasa ity distro ity fa tsy Ubuntu. Hitako fa tena mampanantena izany.
Na dia olon-tiana tsy manam-petra amin'ny Arch Linux aza aho, isaky ny mamaky na mahita vaovao fanabeazana fototra aho, ny marina dia maniry ahy (toa an'i elav) hampidina ny iso ary hametraka an'ity distro mahafinaritra ity. Tiako ny tsotra sy tsotra azy, madio, mazava ary tsy be pitsiny (biraon'ny birao tokony hisy) miaraka amina fampiasa be sy fampiasa ary famahana loharano mahay sy mahay mandanjalanja. Tiako ihany koa fa avy amin'ny LTS izy io satria manome azy io fitoniana sy azo itokisana amin'ny fotoana mety.
Efa navoakako ny iso ary amin'ity farany ity dia apetrako ao amin'ny solosainan'ny zanako vavy kely (izay linux iray manontolo hatramin'ny fotony, mampiasa openSUSE izy) hatramin'ny nanehoako azy azy, tiany izy ary te hanandrana azy.
Zavatra adala mitranga, hiandry azy ho marin-toerana aho ary hisintona ny endritsoratra ao amin'ny birao ary hanandramana amin'ity tontolo birao ity fa amin'ny Arch Linux ho fototra.
Juan Lugo dia hoy izy:
Salama, arahaba, ny marina dia mifindra monina aho amin'ny ubuntu mankany amin'ny archlinux (satria tsara ny ubuntu aloha nefa vao mavesatra izany ary ny fanitsiana ireo lesoka dia tsy mandalo loatra, tsy dia misy fahalalahana), ary na eo aza ny zava-misy Nihomehy kely aho satria manana ilay puce bcm4311 malaza aho, aza kivy ary nandany roa andro aho nanamboatra ny solosaina findrako tamin'ny xfce4 ary tsara daholo ny zava-drehetra, ireo fampianarana izay eo amin'ny Internet misy andohalambo dia maro sy tena tsara. Omaly aho dia nanomboka nanandrana ny Elementary OS ary nahavariana ahy izany, saingy tsy te handao ny Arch aho satria tamin'ity herinandro ity dia betsaka ny zavatra nianarako ary manomboka mahazo aina aho avy amin'ny console Arch, miaraka amin'i pacman sy ireo PKGBUILD AUR.
Ny fanontaniako ho an'ireo izay mahalala bebe kokoa dia, azo atao ve ny mametraka ny tontolon'ny birao ElementaryOS amin'ny fampiharana iray na hafa ao amin'ny Arch? Raha manao fametrahana madio ny Arch amin'ny PC izay efa ho avy aho, dia azoko atao ny mametraka izay rehetra entin'i ElementaryOS ao amin'ny Arch (Midika izany fa avy amin'ny loharano ao amin'ny Launchpad) ary raha azo atao, ahoana?
Misaotra mialoha, ary tena tsara fa ny ElementaryOS dia nilamina ho ahy, ary tena manintona jerena.
Valiny tamin'i Juan Lugo
Azo apetraka amin'ny teny espaniola ve izy?. Ny fahamarinana izay miteraka fametrahana.
Heveriko fa toy ny derivatives rehetra an'ny Ubuntu sy amin'ny ankapobeny ny fizarana rehetra dia azo apetraka ny fanohanana ny fiteny, saingy tsarovy fa beta tompokolahy izy ity ary tsy natao ho an'ny birao famokarana fa ho fanitsiana lesoka
Io dia mety ho.
Heveriko fa tsara, manana fanontaniana iray fotsiny aho, manana ny menio manerantany ve izy io?
Mampiasako izany amin'ny netbook LM13 miaraka amin'ny KDE ary miandry ny hivoahan'ny Nadia 14 KDE hanavao aho fa amin'ny fanehoan-kevitra tiako hosedraina dia tiako ho fantatra raha mora sy mahazo aina toy ny Linux Mint sy ny karazana fonosana ampiasainy satria efa zatra aho. amin'ny .deb ary ny zavatra hitako ao amin'ny tahiry Mint. Mampiasa ny Libre Office 3.6.3 ihany koa aho ary tsy fantatro izay suite misy ny solosaina entiny ary raha afaka manohy mampiasa Skype, Pidgin, VLC, Gimp, Clementine ankoatry ny hafa aho.
Ny osita fototra dia mifototra amin'ny ubuntu 12.04, raha toa ka misy ny fandaharam-pianarana fototra ho an'ny zavatra sasantsasany, izany mba hampiraisana ny interface sy ny traikefan'ny mpampiasa, saingy mbola azonao atao ihany ny mametraka ny programa rehetra azonao apetraka amin'ny linux mint na ubuntu .
Safidy tsara ho an'ny Linux Mint ary heveriko fa tsara kokoa aza izany raha toa ka miteraka faniriana hametraka azy io saingy mieritreritra aho fa hiandry mandra-pivoahan'ny kinova farany.
Tena tsara ny mijery gnome 3, ny OS ambaratonga dia tetikasa be faniriana ary manintona ny sain'ny mpampiasa mbola tsy mahalala Linux.
Mampalahelo fa mifototra amin'ny ubuntu izy ireo ... Tiako izy ireo mifototra farafaharatsiny amin'ny debian na amin'ny distro hafa tsara kokoa toa an'i redhat, sabayon, andohalambo, sns 😀
Tsy haiko hoe maninona ianao no manana an'izany mania ho an'ny Ubuntu. Tombony ho anao ny fanananao fonosana marobe ary ho mpisava lalana amin'ny lohahevitra toy ny lalao ohatra (miaraka amin'ny etona efa ao amin'ny beta). Ny fanohanana sy ny antontan-taratasy tsy manam-petra dia tsy lavitra aoriana na dia miaraka amin'ny debian aza. Fa raha te distro amin'ity fomba ity ianao ary miorina amin'ny debian, andramo ny SolusOS.
Ny hevitra mifototra amin'ny ubuntu dia tsy ratsy, fa araka ny filazanao azy, ny kinova miorina amin'ny Fedora dia tsy hianjera ratsy 😀
Tarantonio re izany.
Skurflame dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara!. ary hitako fa mahavariana kokoa noho ny safidin'ny pear linux 6. ( http://pearlinux.fr/discover/ )
Mamaly an'i Skurflame
Manaiky izahay, izaho koa nametraka an'i Pear fa tsy azoko avela amin'ny Espaniola tanteraka izany.
Amin'ny maha mpampiasa ahy ny elementos avy any Jupiter, manandrana ny fananganana isan'andro, ary izao ny beta dia afaka manome toro-lalana 100% hanandrana izany fizarana izany aho.
Io ihany no fizarana izay tsy mikasika ny famolavolana, ary variana aho amin'izany. Izy irery no manana izay tiako rehetra, lohahevitra mitandrina, endritsoratra natao tsara, sary manaitra ... Ary lazaiko aminao ihany koa fa ny fanovana azy dia tsy mora toy ny amin'ny fizarana hafa, saingy azo atao izany, na dia heveriko fa tsy azo hatsaraina aza. Ny zavatra iray hafa dia ny hoe tianao ny lohahevitra maizina.
Ny fanolanana dia tsikaritra amin'ny zorony rehetra, manana fampiharana novolavolaina niniana natao mba hifanaraka amin'ny rivotra faran'izay kely izy, toa an'i Geary, Maya, sns. Ary ny tsara indrindra dia tsy mametraka zavatra ho anao izy satria eny, manolotra farafahakeliny napetraka hanombohana ary ho an'ny tsiriko dia tsy misy sisa io Avy eo misafidy izay ilainao ianao, tsy iray amin'ireo distros ireo izay mametraka programa 100 izay tsy ampiasainao avy eo.
Raha fintinina, ho anao rehetra izay tsy manana anjara asa voamariky ny fizarana (ary na dia ho anao aza) dia mamporisika anao aho hanandrana an'ity. Azo antoka fa hahagaga anao izany, avy eo ho hitanao ny fizarana kely hafa kely fikarakarana. Angamba ny hany azo avotana amin'ny fandoroana sy mitazona ilay karazany dia ny SolusOS, fizarana iray hafa izay atoroko ny fanandramana.
ElementaryOS no fizarana tiako indrindra ary nampiasaiko nandritra ny 3 volana mahery niaraka tamin'ny Daily Builds ary tsy maintsy milaza aho fa milamina io na dia alohan'ny hamoahana ity Beta ity aza. Efa nanandrana distro maro aho ary ny tena naharesy lahatra ahy indrindra dia ity. Na dia mifototra amin'ny Ubuntu 12.04 aza dia tsara kokoa ny zava-bitany (na amin'ny solosaina findaiko aza ny fihinanana dia azo ampitahaina amin'ny an'ny xubuntu). Farany dia heveriko fa tokony hanome fotoana an'ity fizarana ity ny tsirairay ary hahita fa marina izay lazain'ny tsirairay.
Pd: Na dia antsipiriany kely aza izany, zavatra tsara momba an'i ElementaryOS ihany koa ny sary asehony rehefa mavesatra sy maty izy.
Azonao atao ny manova an'io sary io amin'ny alàlan'ny fametrahana Super Grub Manager
Nanaraka ny fizotrany nandritra ny taona aho, ny tena izy dia te-hamafa ny votoatiko + openbox aho ary hametraka azy, fa tsara kokoa ny miandry ny mahita ny kinova farany, avy eo manandrana manao zavatra mitovy amin'ny birao, mametraka fbpanel ary mampifanaraka azy toy ny wingpanel, apetraho avy amin'ny plank AUR ho toy ny dock, fisie sy xnoise fisie, ny lohahevitra openbox dia dumetella ary ny lohahevitra gtk dia greybird ary toy izany koa:
Naharitra ora vitsivitsy monja…. fa tsara tarehy raha izany dia tsy misy isalasalana.
Ny zavatra nataoko voalohany, na tamin'ny tsy faniriana, dia ny fametrahana Firefox, Chrome, Gedit, Audacious ary ilay malefaka mahazatra ahy, ilay entin'i Luna dia tsy maharesy lahatra ahy.
Ary ny iray amin'ireo zavatra mahasosotra ahy indrindra dia ny tsy fisian'ny bokotra 3 mahazatra ao amin'ny varavarankely, manidy, mampihena ary mampitombo.
Ny mania ananan'ny sasany amin'ny fanesorana azy ireo, efa miaraka amin'izany no very hevitra ho ahy ¬_¬
Eto aho manandrana an'ity distro ity amin'ny Live ary tiako be izany, heveriko fa hamolavola ny netbook-ko ary apetrako, fanontaniana iray; Rehefa mivoaka ny kinova farany, azoko atao ve ny manavao azy io sa mila manao fametrahana madio aho?
Tsy voatery .. 😉
Ny zavatra ratsy dia rehefa tafiditra ao amin'ireo kinovan'ny fonosana izy .. satria miorina amin'ny LTS (distro mangatsiaka)
Tsy hoe mangatsiaka izany, satria ny LTS dia manohy mandray fanavaozana ny fiarovana sy fonosana sasany (oh: Firefox) .. 😉
Ary tsy misy zavatra hafa ... satria raha misy kinova GIMP na LibreOffice vaovao na izay mivoaka, dia tsy azonao apetraka raha tsy manampy repositories ivelany ianao ary eo dia hahavery ilay "sécurité" mahafinaritra an'ny LTS.
Izany no tiako holazaina .. hitazona ireo repo ubuntu 12.04 mandritra ny 5 taona izy io
Heveriko fa ny Elementary dia distro tena tsara tokony hapetrak'izy ireo ho distro mahaleo tena ary hanana ny toerany manana ny toerany
Tanjona manaraka: Ataovy mitovy amin'ny ElementaryOS ny KDE .. 😛
Te-hahafantatra ny fomba hanaovana izany aho.
Ehhh, tsy tiako ilay hevitra, mampianatra ahy ny Elementary… tsy haiko. Gnome Angamba?
koa GTK +
Tsy mbola nahita qtcurve tsara izay manahaka ny Elementary aho. Raha hitanao io dia mba toroy hevitra aho; izay no tiako ho hita.
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa iray izay toa akaiky dia akaiky aho. Raha ny marina dia nantsoina hoe Elementary izy io, izay tsy maintsy atambatra ho solonao, miaraka amin'ny Loko miloko antsoina hoe Elementary Classic Colours. screnshoot...
Ankehitriny, misy zavatra azoko hatsaraina, saingy kamo aho:
1- Mametraha andiana kisary monochrome.
2- Apetraho ho Elementary ny bokotra fikandrana.
3- Esory ny alokaloka amin'ny varavarankely.
Nifidy lohahevitra tsara ho an'ny akorandriaka sy ny varavarankely izy ireo, saingy raha ny amin'ny sary masina dia tsy dia tsara loatra aho.
Tiako ny fampiharana minimalism. Izay tadiavin'ny ekipa Gnome ary foana, ny ekipa Elementary. Nampiasako azy ho LiveCD ary mandeha tsara sy tsara tarehy izy (tsara toa ny fanitarana izay manova ny Gnome Shell toy izao!). Saingy toa hitako fa ny dikan-teny dia tena eo am-pamokarana (kinova 0.1, 0.2, sns)…. ary mila mivoatra izy ireo. Ohatra, ny Maya dia tsy mifangaro amin'ny Kalandrie Gnome Sheel toy ny hoe manao Evolution ary raha manampy ny kalandrie Gmail, na dia kely aza; na ohatra Noise, izay tsy ampy safidy sasany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, inona no tadiavintsika, minimalism na safidy maro hafa? Sarotra ny manatratra ny marimaritra iraisana. Na izany na tsy izany, toa safidy foana ny nandinika azy io, saingy hahaliana kokoa raha toa ka miorina mivantana amin'i Debian izany ary indrindra rehefa mihatsara kely ireo rindranasa vaovao (tena ilaina tokoa). Angamba ny kinova manaraka. Amin'izao fotoana izao dia matoky bebe kokoa amin'ny fivoaran'ny ekipa Gnome aho.
Tiako ny minimalism Gnome-Elementary, Qt tsy GTK +, ary ny configurability KDE, fa ny Gnome 2.x.
Eto aho dia efa miaraka amin'ny distro napetraka ao amin'ny kapila mafy mandeha amin'ny 64 bit ary tena mandeha tsara tokoa.
alex_tur dia hoy izy:
Heveriko fa raha mifototra amin'ny Gnome Shell isika izay manana karatra ATI dia hanana olana?
Mamaly an'i Alex_tur
Io no zavatra tsara indrindra hitako hatramin'izay: ') Ny hany banga dia ny nanitsian'izy ireo ilay bibikely izay ananako tao Ubuntu tamin'ny feo (ao amin'ny LTS ihany, ahoana ny fahalianan'ny ¬¬).
Tena marin-toerana aho efa nampiasa azy io nandritra ny volana maro hatramin'ny ppa ary hitako tokoa ny fanatsarana. Efa misy io avy any Cuba raha sanatria misy Kioban maro ao amin'ny bilaogy ao amin'ny http://download.jovenclub.cu/GUTL/ISO/elementaryos-beta1-i386.20121114.iso. mahafaly
Miezaka ny hanao kopia marina amin'ny birao OSX izy ireo, manaiky izany izahay, fa avy eo hanatsara azy ... izay lavitra ny zava-misy.
Etsy ankilany, efa notsapaiko tamin'ny Virtualbox izany ary mandeha tsara ho an'ny beta izy, miampy fitaovana marobe amin'ny fanaovana azy manokana izay mendri-piderana. Ary eny, tokony homarihina fa anio noho ny tsiriko dia ilay distro miaraka amin'ny birao marefo sy mora jerena indrindra. Tiako ny vokany satria izy ireo ihany no ilaina ary tsy manakana na miteraka fanelingelenana.
O_O, tsy nilaza aho hoe izany dia dika mitovy amin'ny OSX satria fotsiny hoe misy panel up sy dock midina izy. Raha izany dia holazaiko fa ny fikirana XFCE default dia kopia tena mora ihany koa, ary ny KDE dia maka tahaka ny Winbugs satria izy no manana ny bara farany sy ny menio fanombohana. Ny resaka fampiononana no resahina fa tsy an'ny copie. Mandrosoa ary amboary ny zava-drehetra ary ovao ny tontolo iainana ao amin'ny OSX, miaraka amin'ny sarany heveriko fa tontolo iainana tokana. Tsy te-handrehitra afo aho fa TSY COPY AZY!
OSX dia tsy natao hanovana tontolo iainana ary tsy zava-miafina amin'ny rehetra izany.
Ary… tsy heverinao fa ny fisafidianana zavatra betsaka, ny ankizilahy Elementary dia aleony milamina OSX, afaka mamorona ny fomban'izy ireo…
Ary eny, na tiantsika na tsia dia kopia iniana natao izy io, izay tsy voatery ho ratsy amin'izany.
Fa raha ny fijeriko azy dia tsy misy dikany, ny zava-dehibe dia ny fihetsiky ny distro amin'ny solosaintsika.
Nanazava kokoa ny hevitro. Tsy afaka nanoratra azy tsara kokoa aho.
Oo heveriko fa troll aho tamin'io andro io.
Te hahita OSX nohatsaraina va ianao?, Izay ataon'ity adala ity, manaitra http://th3r0b.deviantart.com/gallery/
Ny atidoha ...
Nanoratra tamin'ny ElementaryOS aho nanontany raha manana forum na wiki amin'ny teny espaniola izy ireo ary novaliany fa satria tsy manana izy ireo dia afaka mamorona azy aho.
Adikao sy apetako ilay ampahany mifandraika amin'izany:
Tsy azoko antoka tanteraka izay lazainao (miteny anglisy ihany aho), fa avelao aho hizaha raha afaka manatanteraka izay lazainao aho.
Tsy misy dinika ofisialy, ary noho izany tsy misy dinika ofisialy Espaniola koa. Aleo ianao manangana izay tsy ofisialy. 🙂
Tsy azoko antoka tanteraka izay lazainao (miteny anglisy ihany aho), fa avelao aho hizaha raha afaka miasa amin'izay lazainao aho.
Tsy misy dinika ofisialy, ary noho izany dia tsy misy dinika ofisialy Espaniola koa. Tongasoa anao fotsiny ny mametraka ny tsy ofisialy. 🙂
Ny fomba fahitako azy (ankoatry ny fiheveran'ny tompona bilaogy) dia toa mahasoa tokoa ny nanaovanay azy ary ho loharanom-pahalalana isika, tsy sahy manao izany aho satria vao manomboka amin'ny Linux (8 volana) ary ny ahy dia fanafody Ity siansa informatika ity dia iray amin'ireo fialamboly tiako indrindra hialana andraikitra, saingy hiara-hiasa amin'izay azoko atao aho.
Tsy ratsy ny hevitra. Azontsika atao ny mamorona fizarana manokana ho an'ny ElementaryOS ao amin'ny FORUM. Ny hany olana dia ny mba hiasan'ny Forum amin'ity karazana ity dia tsy maintsy asiana moderina / hatrehan'ny mpampiasa ElementaryOS manana traikefa na mahafantatra ny fivoarana, bibikely sy ny hafa. .. Misy sahy ve?
Mahafinaritra fotsiny ny asan'ireo mpamorona OS Elementary. Manokana ny fotoanany hamoahana ilay kinova vaovao izy ireo, saingy farafaharatsiny karakarainy tsara. Slds.
Great elav fa tsy nahatratra ny iray amin'ireo fampiharana tiako indrindra ianao tany amin'ny ambaratonga voalohany, izay feedler, mpamaky fahana kely sy tsara tarehy nosoratan'i vala ary miaraka amina fampiasa maro, ny mpamaky dia manana ny fomba fanabeazana fototra sy minimalista izay miaraka aminy ary azonao atao ny manisy marika ny lahatsoratrao ireo tianao indrindra ary ireto dia apetaka anaty lisitra ahafahanao miditra aminy mora foana
Azon'izy ireo natao ny nandao ny volondavenona ambony / volafotsy toy ny osx ary tsara izany.
Salama, manao ahoana ity Distro ity momba ny enti-manana? Mandany be?
Miarahaba anao ary misaotra.!
"Fanapahan-kevitra tena hendry (tokony hianaran'ny Ubuntu) ny fanoloana Compiz amin'ny Gala, mpitantana varavarankely izay mampiasa LibMutter."
Ny andiany voalohany an'ny Unity dia nifototra tamin'i Mutter.
Rehefa nanapa-kevitra ny hifindra amin'ny compiz i Ubuntu dia satria ny mutter dia mbola ao amin'ny fahazazany, efa ela ny compiz ao aoriany.
Raha ny fahitako azy dia mbola safidy tsara kokoa noho Mutter io, saingy efa resaka tsiro io.
Izy io dia karazan-trondro gnome-tsara. Tiako izany, saingy tsy nahagaga ahy izany, raha ny ahy dia aleoko kanelina.
Miaraka amin'ny fanitsiana sasany amin'ny kanelina dia mitovy ihany ny vokatra azo, ary mahatratra ny fahamendrehana sy ny fitoniana. azo configurable kokoa ihany koa izy io.
Na izany na tsy izany dia mahita ny ho avy aho.
Tena tsara ny distro, miseho milamina sy tena milay izy io, somary manelingelina ny sary mihetsika manova ny birao fa voalamina tsara (ny birao ihany no soloinao rehefa manamboatra ny zorony ianao). Heveriko fa nisy fivoarana iray tao amin'ny GNU / Linux hita nandritra ny taona vitsivitsy: ny fizarana "layer" fampandrosoana 3 na maromaro, amin'ity tranga ity dia miorina amin'ny Ubuntu ny Elementary izay mifototra amin'i Debian, raha i Debian kosa mifampiraharaha amin'ny ny "base" ny ambiny dia mihombo hatrany ny endrik'ilay mpampiasa. Etsy ankilany, heveriko fa ny Elementary dia tsy ho distro "style" KDE, izay ny fanamboarana no zava-dehibe, distro "minimalist manana safidy vitsivitsy" toa ahy no fomba (fomba Gnome-Shell). Ary farany, ny habetsaky ny "akorandriaka" ananan'i Gnome 3 dia manaitra, heveriko fa ny "maritrano" birao nofidian'ny ankizy Gnome dia tena manentana ny saina amin'ny fivoarana hafa. Salama.
Tetikasa tena manome toky fa maharitra loatra ny tsingerin'ny fampandrosoana.
Eny ... naharitra kely ny fifaliana, nanome tsy fahombiazana betsaka tamiko izany ary nandalo ny Pear Linux aho ary nampidina ny ISO Live ary gaga be aho hoe ahoana ny fikarakarana sy ny fivelaran'izy ireo ankehitriny, napetrako fotsiny ho takalon'ny Elementary mba hahitako raha farany Amboary ny sasany alohan'ny hanandramana an'i Nadia KDE hehehe 🙂
Hugo Carrera dia hoy izy:
Notsapaiko tamin'ny solo-sainako ity distro ity ary tsotra… manintona… tonga lafatra nefa tiako ny mametraka fanontaniana… amporisihinao hampiasa an'ity distro ity amin'ny asus EEEpc 1000h, manana processeur 1.6 atom ary ram 1 gb… efa nanandrana aho distros maromaro (peacy mora, kubuntu misy netbook plasma izay tsy azoko natao tsara, linpus 1.7, joli os,) ho an'ny netbook ary raha ny marina dia hitako fa mihisatra miadana izy ireo indraindray ... na distro inona no amporisihinao amin'ity fitaovana ity ...
Valiny tamin'i Hugo Carrera
Archlinux + Openbox na LXDE na XFCE, na raha tsy manana fahalalana be ianao na tsy te handany fotoana dia mandehana mankany amin'ny crunchbang (Debian + Openbox). ^ _ ^
Misaotra betsaka ... raha ny marina henoko ny arch linux mampatahotra ahy ... hahaha ... fa efa manandrana aho ... misaotra anao mamaly
Emal dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha misy fomba fanamboarana azy, ny olako dia rehefa manokatra horonantsary iray amin'ny efijery feno dia mikorontana ambony. Ny efijery feno ihany
Ankehitriny dia mizaha toetra ny SDOS aho, manome ahy ny olana mitovy satria mifototra amin'ny ubuntu 12.04, fa ny andro hafa nametrahako ny ubuntu 12.10 ary ny nahagaga ahy dia tsy choppy intsony izy tamin'ny efijery feno. Manontany tena aho raha misy vahaolana amin'izany.
Manana kahie SAMSUNG nv300, intel core i5 - 4GB aho.
Valiny tamin'i Emal
Ny Ubuntu malalako dia tsy manova an'izany 😉
Tena tsara ny tontolon'ny birao, tsara tarehy toa izany, saingy ny marina dia tsy dia tiako loatra ny hevitra fanovana sy fanovana distro raha toa ka misarika ny saiko ny tontolon'ny birao (na dia tena tsara miaraka amina firaisan-kina aza aho) dia aleoko miandry an'ity misy aho mba hahafahako manampy azy ao amin'ny ubuntu.
Misy sendra mahafantatra ve hoe rahoviana no hivoaka ny kinova Pantheon, misy daty ofisialy famotsorana azy ve? raha eny, mandra-pahoviana no mety hahitana azy ao amin'ny tahiry ubuntu? Mihobia! 🙂
Tsia, tsy misy daty famotsorana ofisialy momba an'io, hoy izy ireo fa "ho vonona izany rehefa tonga izany"
Ny olana amin'ny Unity dia, ary ho fampisehoana mandritra ny fotoana maharitra. Ny Elementary dia mampiasa foto-kevitra mahafinaritra sy mahafinaritra ary mahomby maro.
Tahaka ny maro izay nisafidy an'ity lahatsoratra ity dia nanandrana ny OS ambaratonga voalohany aho ary toa tena tsara izany, na dia misy lesoka hafa aza heveriko fa tena zava-dehibe, toy ny motera fikarohana any an-tampon'ny misy ny tontolon'ny birao hafa.
Ny antsipiriany iray hafa mahatonga ahy tsy mahazo aina dia ny tsy ahafahako mifandray amin'ny Internet miaraka amin'ny modem HUAWEI 3g, na dia eken'ny rafitra aza izany, tsy mamela ahy hifandray izy, indrisy fa tsy hitako izay olana. Tena tiako raha misy mahalala momba an'io satria tiako ny mampiasa an'io distro io any aoriana.